PDF Tools များ
PDF မှ HTML သို့
PDF ပေါင်းစည်းခြင်း သင်ခန်းစာ
PDF ကိုရွေးချယ်ပါ သင်ခန်းစာ
PDF ပုံရိပ်များကိုထုတ်ယူပါ သင်ခန်းစာ
PDF မှ HTML သို့ သင်ခန်းစာ
PDF ဖြင့်စာမျက်နှာခွဲပါ သင်ခန်းစာ
PDF စာသားဖြည်ပါ သင်ခန်းစာ
PDF files တွေကိုဘယ်လိုပေါင်းစည်းမလည်း
သင်၏ PDF ဖိုင်များကိုအလျင်အမြန်နှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
PDF ဖိုင်များစွာကို PDF ဖိုင်တစ်ခုနှင့်ပေါင်းခြင်း
PDF ဆိုတာလူသုံးအများဆုံးစာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်သင်၏ PDF ဖိုင်များကိုမတင်သွင်းမီ PDF ဖိုင်တစ်ခုသို့ပေါင်းစည်းရန်သင့်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ။ ဤသင်ခန်းစာသည်သင်၏ PDF ဖိုင်များကိုပေါင်းစည်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. မည်သည့် software ကို install လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ & သင်၏ဖိုင်များ၏လုံခြုံရေးကိုစိတ်မချပါနဲ့.
ကိရိယာများ: PDF ပေါင်းစည်းခြင်း. ခေတ်မီ browser ကဲ့သို့သော Chrome, Firefox, Safari, Edge စသည်
FileReader, WebAssembly, HTML5, BLOB, Download စသည်တို့ကိုထောက်ပံ့သော Browser
ဤလိုအပ်ချက်များကိုမခြိမ်းခြောက်ပါနှင့်၊ မကြာသေးမီ ၅ နှစ်အတွင်းမှ browser အများစုသည်သဟဇာတဖြစ်သည်
ပထမဆုံး web browser ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါထဲကတစ်ခုကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် browser ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပြလိမ့်မည်
ရွေးချယ်စရာ 1: အောက်ပါကိုရိုက်ထည့်ပါ "https://my.pdf.worthsee.com/pdf-merge" အဖြစ် #1 ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း OR;
ရွေးချယ်စရာ 2: အောက်ပါကိုရိုက်ထည့်ပါ "https://my.pdf.worthsee.com", ထို့နောက်ဖွင့်လှစ် PDF ပေါင်းစည်းခြင်း tool ကို ရေကြောင်းဖြင့် "PDF Tools များ" => "PDF ပေါင်းစည်းခြင်း"
ကိုနှိပ်ပါ ခလုတ် "PDF ဖိုင်များကိုရွေးချယ်ပါ" (အဖြစ် ခလုတ် #2 အပေါ်ကပုံမှာပါ) PDF ဖိုင်များကိုရွေးချယ်ရန်
သင်လိုချင်သလောက်ဖိုင်များကို ရွေးချယ်၍ သင်ကြိုက်သလောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်ပေါင်းလိုသည့် pdf ဖိုင်တွင်သင်လိုချင်သည့်အစဉ်အတိုင်းစီစဉ်ရန်ဖိုင်များကိုဆွဲချပါ
ကိုနှိပ်ပါ ခလုတ် "စတင်ပေါင်းစည်း" (အဖြစ် ခလုတ် #4 အပေါ်ကပုံမှာပါ) ပေါင်းစည်းမှုစတင်ရန်ဖိုင်များကြီးမားပါကအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်
ပေါင်းစည်းမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်ပေါင်းစည်းထားသောဖိုင်ကိုပုံတွင်ပြထားသည့်နေရာတွင်တင်ပြလိမ့်မည် #5 အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း, သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၎င်းကိုနှိပ်နိုင်သည်
PDF ဖိုင်များကိုအောင်မြင်စွာပေါင်းစည်းပြီးနောက် download link ကိုပြလိမ့်မည်
ပေါင်းစပ်ထားသောဖိုင်အတွက်ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုကိုလည်း၊ ပုံတွင်ပြထားသည် #6 အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း, ဒေါင်းလုပ်မချခင်အမြန်ကြည့်လို့ရတယ်
သင်၏ PDF ဖိုင်များကို sort လုပ်ရန်လှည့်ကွက်
ဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့ပေါင်းစည်းရန်သင်၏ PDF ဖိုင်များအားလုံးကိုကူးယူပါ၊ ပြီးနောက်ဖိုင်များကိုရွေးပြီးနောက်၊ ထိုဖိုင်တွဲသို့သွားပါ။
သင်၏ PDF ဖိုင်များကိုနာမည်ပြောင်းပါ 1_PdfFoo.pdf, 2_PdfBar.pdf, ..., PDF ဖိုင်များကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "" ဖိုင်များကိုနာမည်အနေဖြင့်စီရန်။ ဤတွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြရန်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်
သင့်တွင် PDF ဖိုင်တွဲအချို့ရှိနေပြီး၎င်းတို့ကိုသီးခြားအစီအစဉ်အတိုင်းပေါင်းစည်းရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါစို့၊ မူလကဖိုင်တွဲတွင်ရှိသည့်အမိန့်ဖြစ်သည်။
သတိပြုရန် - ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်များသည်သူတို့၏မူလအစဉ်အတိုင်းပြသမည်မဟုတ်ပဲဘရောင်ဇာက ၄ င်းကိုအပြိုင်ဖတ်နိူင်မည်၊ ထို့ကြောင့်သေးငယ်သောဖိုင်သည်ရှေ့တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "" သင်၏ဖိုင်များကိုကိုယ်တိုင်စီရန်
ပြanyနာတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာများ, ဒီဟာကမကူညီဘူးဆိုရင်သိပါစေ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ကျွန်ုပ်၏ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားသောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်၏ PC / Mobile တွင်မည်သို့ရှာရမည်နည်း
အဘယ်ကြောင့် worthsee.com ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ငါ၏ဖိုင်များကို process လုပ်ဖို့လုံခြုံတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲ files တွေကို browser အတွင်းမှာဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲ